Blog vaovao avy amin'ny The Reward Reward: Fitiavana, firaisana ary ny Internet
Loha Hevitra ato Anatiny Topy maso momba ny loza mety hitranga amin'ny sary vetaveta momba ny atidoha amin'ny otrik'aretina horonantsary fohy momba ny fiarovana ny ankizy fanadihadiana vaovao nataon'ny ray aman-dreny ho an'ny ray aman-dreny momba ny vokatry ny pôrnônika amin'ny ankizy.
Media sosialy sy fahaketrahana
adminaccount888 12 ny Desambra 2020 Vaovao farany
Betsaka ny resaka nandeha tato ho ato momba ny hoe misy ifandraisany amin'ny fahaketrahana ny fampiasana ny media sosialy (SMU). Ity fandalinana vaovao ao amin'ny American Journal of Preventive Medicine ity dia milaza fa mety izany. Mijery ny fampiasana media sosialy izahay…
Mahatsiaro tena ho meloka ve ianao amin'ny fitantanana ny fotoana hijerenan'ny zanakao?
adminaccount888 4 ny Desambra 2020 Vaovao farany
“Matetika rehefa miara-miasa amin'ny fianakaviana aho dia manomboka miresaka momba ny fiatraikany ara-batana amin'ny fotoam-pivarotan-tsary. Ahoana ny fomba handikana ny fotoana an-tsarimihetsika amin'ny soritr'aretina manokana, ary ny fomba fampiharana ny fifadian-kanina elektronika lava (na ny efijery haingana) dia afaka manampy amin'ny famerenana ny ati-doha ary hanazava izay mitranga. ...
Fitiavana sy hery manasitrana mikasika ny fikasihana
adminaccount888 November 19 Vaovao farany
Ny fitiavana sy ny herin'ny fanasitranana avy amin'ny fikasna dia zava-dehibe amin'ny fahasalamantsika satria mahatonga antsika hahatsapa ho voaro, voakarakara ary tsy dia miady saina. Oviana ianao no nokasihina farany? Raha te hahalala bebe kokoa dia nanao fanadihadiana antsoina hoe The Touch Test ny BBC momba an'io…
Lesona MAIMAIMPOANA amin'ny Internet sy sary vetaveta amin'ny Internet
adminaccount888 October 16 Vaovao farany
"Amin'ireo hetsika rehetra amin'ny Internet, ny pôrnôgrafia dia manana ny mety hahatonga azy ho mpidoroka," hoy i Neerkerk et al-neurolojista holandey. Raha tsy misy ny lalàna fanamarinana taona sy ny mety hisian'ny fanidiana fanampiny izay ahafahan'ny ankizy miditra amin'ny tranokala malalaka kokoa,…
'Breath Play' aka Strangulation miakatra haingana
adminaccount888 11th September 2020 Vaovao farany
Nanaitra ny sofina nandre ny ankizivavy iray 14 taona nanambara taminay fa “niditra an-kink” izy. Teo imason'ny tanora 20 hafa izahay tao amin'ny lahateny iray momba ny loza mety hitranga manodidina ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Efa telo taona izay…
adminaccount888 July 20 Vaovao farany
Ny Reward Foundation dia nandany ny fahavaratra niara-niasa tamin'i John Carr, OBE, sekretera ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny asa soa ho an'ny ankizy any UK momba ny fiarovana amin'ny Internet, hamokarana ny kaonferansa virtoaly fanamarinana Age voalohany ho an'ny pôrnôgrafia. Nitranga tamin'ny volana Jona 2020. Tafiditra ao anatin'ilay hetsika…
Ny Reward Foundation dia mandray anjara amin'ny fiaraha-miombon'antoka 2020 hamaranana ny vovonana an-tserasera an-tserasera manerantany amin'ny 18 ka hatramin'ny 28 Jolay. Miaraka amin'ny mpandahateny 177 sy mpanatrika maherin'ny 18,000 avy amin'ny firenena maherin'ny 100, ity no hetsika lehibe indrindra teto…
Fikarohana 'Manifesto' ho an'ny pôrnôgrafia
adminaccount888 16th May 2020 Vaovao farany
Tamin'ny volana Jona 2019 Dr Darryl Mead sy Mary Sharpe dia nanomana manifesto ho an'ny fikarohana sary vetaveta. Natolotra tamin'ny Konferansa Iraisam-pirenena momba ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena any Yokohama, Japon. Ireo mpikaroka ao amin'ny TRF dia hita miaraka amin'i Dr Marc Potenza sy Gretchen Blycker…
Ny Coalition Iraisam-pirenena dia miantso ireo orinasan-tserasera lehibe amin'ny fampitsaharana ny asa miaraka amin'ny indostrian'ny pôrnôgrafia
adminaccount888 8th May 2020 Vaovao farany
Ireo mpisolovava sy fikambanana miaro amin'ny fiarovana ny zaza sy ny fanararaotana miady amin'ny lahy sy ny vavy avy any Aostralia, Belzika, Bolivia, Kanada, Danemarka, Angletera, India, Irlanda, Liberia, Scotland, Suède, Oganda, ary Etazonia dia nandefa taratasy iraisana tamin'ity herinandro ity karatra sy fikarakarana fandoavam-bola…
Page 1 ny 14